घरको बन्धनबाट मुक्त भएँ | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
चेङ शि, चीन
आखिरी दिनहरूको परमेश्‍वरको कामलाई ग्रहण गरेको लामो समय नबित्दै, मैले मेरो श्रीमानलाई सुसमाचार प्रचार गरेँ। सुसमाचार सुनेपछि मलाई चकित पार्दै उहाँले सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डलीको बारेमा अनलाइनमार्फत् हरप्रकारका झुटा खबर खोज्नुभयो, जुन सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डलीविरुद्ध चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीद्वारा रचिएका निन्दा र अफवाहहरू थिए। अनि, उहाँले मलाई रिसले चूर भएर हेर्नुभयो र चिच्याउनुभयो, “यहाँ हेर! तिमीले जेमा विश्‍वास गर्छौ, त्यो पूर्वीय ज्योति हो, जसलाई वर्षौंदेखि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले कारवाही गर्दै आएको छ। तिनीहरूले पक्राउ गर्नेबित्तिकै तिमीलाई सजाय दिएर जेल पठाउनेछन्। अबउप्रान्त तिमीलाई विश्‍वास गर्ने अनुमति छैन!” त्यसपछि उहाँले परमेश्‍वरका वचनहरूको मेरा सबै पुस्तकहरू च्यातिदिनुभयो। त्यस समयमा, म क्रोधित भएँ, तर, त्यसपछि, मैले सोचेँ चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीद्वारा एकछिनका लागि धोका पाएको कारण मेरो श्रीमानले मैले विश्‍वास गरेकोमा विरोध गर्न सक्‍नुहोला तर उहाँले पछि बुझ्नुहुनेछ। तर मलाई थाहा थियो कि जेसुकै भए तापनि परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्नु जीवनको सही मार्ग हो र म यसलाई कदापि त्याग्‍नेवाला थिइनँ। त्यसपछि, मेरो श्रीमानले मेरा गतिविधिहरू पत्ता लगाउन हरदिन मलाई फोन गर्नुभयो। त्यस समयमा, म स्‍नातक तहको विद्यार्थी थिएँ, त्यसैले, उहाँको निगरानीदेखि बच्न, मैले स्कुलनजिकैको भेलाहरूमा भाग लिन्थेँ र सप्ताहान्तहरूमा मात्रै घर जान्थेँ। सन् २०१२ को अन्त्यमा, जब चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डलीको विरुद्धमा इन्टरनेट, टिभी र पत्रपत्रिकाहरूमा अझ उन्मत्त रूपमा दमन र पक्राउहरूको अभियान सुरु गर्‍यो, तब सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डलीलाई भत्सर्ना र निन्दा गर्ने अफवाह र भ्रमहरू जताततै थिए, र तिनीहरूले हरठाउँमा विश्‍वासीहरूलाई पक्राउ गर्दै थिए। परमेश्‍वरमा विश्‍वास गरेको कारण मलाई पक्राउ गरिनेछ भनी मेरो श्रीमान् डराउनुभएको थियो, जसले उहाँ र उहाँको परिवारलाई असर गर्न सक्‍नेथियो, मप्रति उहाँका प्रतिबन्धहरू झन् झन् कडा हुँदै गए। उहाँले मलाई धम्की दिँदै भन्‍नुभयो यदि मैले परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्न जारी राखेमा उहाँले मसँग सम्बन्धविच्छेद गर्नुहुनेछ। उहाँको कुरा सुनेर म धेरै उदास भएँ। चीनमा रही परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्दा हाम्रो निम्ति सजाय र जेलको खतरा मात्र होइन, हामीले आफ्नो परिवारबाट पनि सतावट भोग्छौँ। हाम्रो निम्ति परिस्थिति धेरै कठिन छ! मैले सोचेँ, हामीले सम्बन्धविच्छेद गर्‍यौँ भने हाम्रो छोरीको के हुनेछ? ती केही दिनहरूसम्म, मलाई कर्तव्य निर्वाह गर्न कुनै रुचि भएन। म दयनीय थिएँ।
त्यसपछि, जब एकजना सिस्टरले मेरो अवस्थाको बारेमा जानिन्, तब उनले मेरो लागि परमेश्‍वरको वचनबाट एउटा खण्ड पढिदिइन्। त्यो मेरो निम्ति धेरै सहयोगी थियो, “परमेश्‍वरले मानिसहरूभित्र गर्ने कार्यको प्रत्येक चरणमा, बाहिरी रूपमा यो मानिसहरू बीचको अन्तरक्रिया जस्तो देखिन्छ, मानवको बन्दोबस्त वा हस्तक्षेपहरूबाट जन्मेको जस्तो देखिन्छ। तर पर्दा पछाडि, कार्यको प्रत्येक चरण, र जे कुरा पनि हुन्छ, त्यो शैतानले परमेश्‍वरसँग बाजी थाप्‍ने कार्य हो, र यसका लागि मानिसहरूले परमेश्‍वरको साक्षी दिन दह्रिलो भएर खडा हुनु आवश्यक हुन्छ। उदाहरणको लागि अय्यूबलाई परीक्षा गरिएको घटनालाई लिऊँ: पर्दा पछाडि शैतानले परमेश्‍वरसँग बाजी थापिरहेको थियो, र अय्यूबलाई जे भयो त्यो मानिसहरूको कार्यहरू र मानिसहरूको हस्तक्षेप थियो। तिमीहरूमा परमेश्‍वरले गर्ने कार्यको प्रत्येक कदमको पछाडि शैतानले परमेश्‍वरसँग बाजी थापेको हुन्छ—पछाडिपट्टि यो सबै युद्ध हो” (वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छको “परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्नु मात्रै साँचो रूपमा परमेश्‍वरलाई विश्‍वास गर्नु हो”)। परमेश्‍वरका वचनहरूबाट मैले के बुझेँ भने बाह्य रूपमा यी कठिन परिस्थितिहरू मेरो श्रीमानले मलाई प्रतिबन्ध लगाउनु र सताउनु थियो, तर वास्तवमा त यो शैतानको बाधा थियो। परमेश्‍वरले मानिसहरूलाई उद्धार गर्न चाहनुहुन्छ तर शैतानले चाहिँ मलाई परमेश्‍वरलाई त्याग्‍न र उहाँको मुक्ति गुमाउने तुल्याउन र अन्त्यमा गएर आफूसितै नरकमा घिस्याउनका निम्ति सबै प्रकारका बाधा र अवरोधहरू ल्याउँछ। शैतान अति अनिष्टकारी र क्रुर छ! त्यस समयमा, मैले परमेश्‍वरलाई प्रार्थना गरेँ, “परमेश्‍वर, मेरो कद अति सानो छ, त्यसैले तपाईंले मलाई विश्‍वास दिनुहोस् भनी बिन्ती गर्छु। मैले मेरो श्रीमानलाई त्याग्‍नु नै परे तापनि म तपाईंलाई विश्‍वासघात गर्ने छैन, म शैतानका युक्तिहरूमा फस्‍नेछैनँ।” मैले प्रार्थना गरिसकेपछि, मलाई सहन धेरै गाह्रो भएन, अनि मैले सुसमाचार फैलाउन र आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न जारी राखेँ।
वर्षको अन्त्यतिर, तपाईं एउटा भेलामा हुँदा पक्राउ पर्नुभएको मैले सुनेँ। प्रहरीले मलाई “सामाजिक व्यवस्था बिथोलेको” आरोप लगाए र तीस दिनसम्म हिरासतमा राखे। सोधपुछ गर्दा, राष्ट्रिय सुरक्षा ब्युरोका प्रहरीले मलाई धम्क्याए, “परमेश्‍वरमा विश्‍वास गरेको कारण तिमी पक्राउ परेको कुरा तिम्रो स्कुललाई थाहा भइसक्यो र तिमीलाई निष्कासन गर्ने भनेका छन्। तर, तिमीले हामीसित सहकार्य गर्‍यौ र तिमीलाई जे थाहा छ, सो हामीलाई बतायौ भने, हामी तिम्रो पक्षमा डिनसित कुरा गर्नेछौँ र तिम्रो स्‍नातकको पढाइ जारी रहन सक्‍नेछ। यसबारेमा गम्भीर भएर सोच!” तिनीहरू गएपछि, मैले जेलको चिसो फलामे डन्डीलाई हेरेँ, मलाई पूरै हताश र दयनीय महसुस भयो। यदि परमेश्‍वरमा विश्‍वास गरेको कारण मलाई स्कुलबाट निकालियो भने, यो राजनैतिक मामला हुन्थ्यो। त्यो मेरो विद्यार्थी अभिलेख र प्रहरी फाइलमा रहन्थ्यो। कुनै अस्पतालले मलाई रोजगार दिँदैनथ्यो, अनि डाक्टर हुने मेरो सपना चकनाचूर हुन्थ्यो। ३० वर्षको उमेरमै मेरो अध्ययन, काम र भविष्य सबै सकिन्थ्यो। म भविष्यमा कसरी जिउने? मैले मेरा आफन्तहरूको भेदभाव र वरिपरिका मानिसहरूको उपहासलाई कसरी सामना गर्ने? केही दिनसम्म, मैले राम्रोसित खान र सुत्‍न सकिनँ। त्यस समयमा, मैले यसबारे हरेक दिन प्रार्थना गर्थें। एक बिहान, मैले आफैलाई अचेतन रूपले परमेश्‍वरको भजन गुनगुनाइरहेको पाएँ: “तँ एक सृष्टि गरिएको प्राणी होस्—तैँले अवश्य पनि परमेश्‍वरको आराधना गर्नुपर्छ र अर्थपूर्ण जीवनको खोजी गर्नुपर्छ। तँ एक मानिस भएकोले तैँले आफैलाई परमेश्‍वरका निम्ति समर्पित गर्नुपर्छ र सबै दुःखहरू भोग्नुपर्छ। तँ आज जुन सानो दुःखमा परेको छस् त्यसलाई तैँले खुसी र दृढतासाथ स्वीकार गर्नुपर्छ, अनि अय्यूब र पत्रुसले जस्तो एक अर्थपूर्ण जीवन जिउनुपर्छ। तिमीहरू त्यस्ता मानिसहरू हौ जसले सही मार्गलाई पछ्याउँछन्, जसले सुधारका खोजी गर्छन्। तिमीहरू त्यस्ता मानिसहरू हौ जो ठूला रातो अजिङ्गरको देशमा खडा हुन्छन्, जसलाई परमेश्‍वरले धर्मी भन्नुहुन्छ। के त्यो सबैभन्दा अर्थपूर्ण जीवन होइन र?” (थुमालाई पछ्याउनुहोस् र नयाँ गीतहरू गाउनुहोस्को “सबैभन्दा अर्थपूर्ण जीवन”)। परमेश्‍वरको वचनको त्यो भजन गाउँदा त्यसले विशेष रूपले मेरो हृदय छोएको महसुस गरेँ मैले मेरा आँसुहरू रोक्‍न सकिनँ। म सृष्टि गरिएको व्यक्ति हुँ र मैले परमेश्‍वरलाई विश्‍वास र आराधना गर्नुपर्छ। यो मैले गर्ने स्वाभाविक र सही कुरा हो। प्रभुमा विश्‍वास गर्ने परिवारमा मेरो जन्म हुने कुरा परमेश्‍वरले नै निर्धारित गर्नुभयो ताकि सानै उमेरदेखि नै मैले परमेश्‍वरको अस्तित्वलाई जान्‍न सकूँ। आखिरी दिनहरूमा, परमेश्‍वरले मलाई चुन्‍नुभयो र प्रभुको आवाज सुन्‍न र उहाँलाई ग्रहण गर्ने मौका दिनुभयो। उहाँले मलाई परमेश्‍वरको वचनको सिञ्चन र आपूर्ति प्राप्त गर्ने, त्यसको न्याय र शुद्धीकरणलाई स्वीकार गर्ने र परमेश्‍वरको मुक्ति प्राप्त गर्ने मौका दिनुभयो। यो अविश्‍वसनीय आशिष्‌ हो! पुस्तौँपुस्ता परमेश्‍वरलाई पछ्याएका धेरै मानिसहरूको बारेमा मैले सोचेँ। परमेश्‍वरको सुसमाचार फैलाउन, तिनीहरूले सतावट र कठिनाइ सहे, धेरैले त आफ्नो जीवन पनि परित्याग गरे। तिनीहरू सबैले परमेश्‍वरका निम्ति सुन्दर, गुञ्जायमान् गवाही सृजना गरे। त्यो मेरो निम्ति धेरै प्रेरणादायी थियो। मैले सोचेँ, यदि मैले आफ्ना स्वार्थहरू र भविष्यलाई रक्षा गर्न परमेश्‍वरलाई विश्‍वास गर्न छोड्छु भने, के मसित अझै विवेक हुन्छ त? के म मानिस कहलिन योग्य हुन्छु र? यो सोचले मलाई शक्ति दियो र मैले शपथ खाएँ मलाई निष्कासन गरिए गरियोस् वा मेरो भविष्य र भवितव्य पछि जेसुकै होस्, र मेरो वरिपरिका मानिसहरूले मलाई जसरी तिरष्कार र निन्दा गरे नि गरून्, म परमेश्‍वरलाई विश्‍वासघात गर्नेछैनँ र म परमेश्‍वरको गवाही भई खडा हुनेछु। मलाई अन्तिमपटक सोधपुछ गर्दा, मैले धेरै शान्तपूर्वक प्रहरीलाई बताएँ, “यदि स्कुलले मलाई निष्कासन गर्‍यो भने, म यति मात्र आग्रह गर्छु कि तपाईंले मेरो श्रीमानलाई स्कुल गएर मेरा सरसामान लिइदिन भनिदिनुहोस्।” जब प्रहरीले म दृढ रहेको देखे, तिनीहरू निरुत्साहित भएर गए। म परमेश्‍वरप्रति धेरै कृतज्ञ थिएँ।
म मुक्त भएर घर पठाइएपछि, मेरो श्रीमानले मलाई रिसाउँदै भन्‍नुभयो, “प्रहरीले मलाई भनेको छ, यदि परमेश्‍वरलाई फेरि विश्‍वास गरेर तिमी पक्राउ पर्‍यौ भने एक महिनाको कैद मात्र हुनेछैन। यसले म र मेरा छोरीहरूलाई पनि असर गर्नेछ। हाम्रा छोरीहरू विश्‍वविद्यालय जान सक्‍नेछैनन्, राम्रो जागीर गर्न वा सार्वजनिक सेवामा काम गर्न सक्‍नेछैनन्। के तिमीले बुझ्यौ? परमेश्‍वरलाई विश्‍वास गरेको कारण तिमीलाई पक्राउ गरिएकोले मैले पनि एक महिना कष्ट भोगेँ। म कतिचोटि रोएँ भनी म तिमीलाई बताउन सक्दिनँ, र म झण्डैले गाडी दुर्घटनामा परेँ। तिमीलाई जेलबाट निकाल्न म सहयोगको भीख माग्दै हिँडेँ र आफै पूरा लज्‍जित भएँ। फेरि कहिल्यै त्यसरी म कष्ट भोग्‍न चाहन्‍नँ।” मैले विश्‍वास गर्न छोड्न र परिवारको बारेमा ज्यादा सोच्न सक्छु कि भनेर पनि उहाँले मलाई सोध्‍नुभयो। त्यसभन्दा पर, मलाई मेरा दाजुभाइ-दिदीबहिनीहरूसित सम्पर्क गर्नदेखि रोक्‍न, उहाँले मलाई अपराधी नै हो कि जस्तो गरी निगरानी गर्नुभयो। उहाँले मलाई घर छोड्न दिनुभएन र बिलकुलै कुनै स्वतन्त्रता दिनुभएन। उहाँ काममा जानुहुँदा उहाँले मलाई हेर्न आफ्नी आमा लगाउनुभयो। उहाँले म कहाँ छु र के गरिरहेको छु भनेर सोध्‍न निरन्तर फोन गर्नुहुन्थ्यो। चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीलाई अवज्ञा गरेमा हुने परिणामहरूको बारेमा मलाई सचेत गराउन र परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्नेबारेमा मसित रहेका विचारहरूलाई निर्मूल गर्न उहाँले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका विभिन्‍न क्रान्तिकारी गतिविधिहरू र तिनीहरूले प्रयोग गर्ने हिंस्रक सुधारात्मक विधिहरूको बारेमा मलाई निरन्तर बताउनुहुन्थ्यो। उहाँले यस्तो पनि बताउनुभयो, “चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले तिम्रो मण्डलीको बारेमा रचेका अफवाहहरू झुटो हुन् भन्‍ने मलाई थाहा छ। तिमी परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्न चाहन्छौ तर तिनीहरूले गर्न दिँदैनन्। तर तिमीले अवज्ञा गरेमा, तिनीहरूले तिम्रो जीवन बर्बाद गरिदिनेछन्। सांस्कृतिक क्रान्तिको समयमा र जून ४ को घटनामा दुःखद मृत्यु पाएका मानिसहरूलाई हेर। यदि तिमीले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीलाई अप्रसन्‍न तुल्यायौ भने, तिमी विदेश भाग्‍न पनि सक्दैनौँ।” मेरी सासुले पनि थपेर भन्‍नुभयो, “चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी राम्रो छैन तर तिनीहरूसित शक्ति छ। हामी केवल साधारण मानिसहरू हौँ, तिनीहरूको विरोध गर्न हामीसँग पर्याप्त बल छैन।” त्यसपछि, मलाई परमेश्‍वरमा विश्‍वास गरेको कारण निष्कासित गरियो, मेरो श्रीमानले हाम्रो परिवारमा भएका सबै खराब कुराहरूका निम्ति परमेश्‍वरप्रतिको मेरो विश्‍वासलाई दोष्याए। जब-जब कुनै कुराले उहाँलाई कष्ट दिन्थ्यो, तब-तब उहाँले मलाई हप्काउनुहुन्थ्यो, गिल्ला गर्नुहुन्थ्यो र मेरो खोइरो नै खन्‍नुहुन्थ्यो। त्यस्तो प्रकारको जीवनले मलाई निकै निराश स्थितिमा पुर्‍यायो, त्यसमाथि, मैले परमेश्‍वरको वचन पढ्न वा मेरा दाजुभाइ-दिदीबहिनीहरूलाई सम्पर्क गर्न सक्दिनथेँ। त्यसैले, म विशेष रूपले दयनीय थिएँ, ती दिनहरू कहिले सकिनेछन्? मलाई थाहै थिएन।
त्यस समयमा, म प्रायः परमेश्‍वरलाई अन्तर्दृष्टि दिन, मार्गदर्शन गर्न र मलाई उहाँको इच्छा बुझ्न मदत माग्दै प्रार्थना गर्थें। एकदिन, मैले परमेश्‍वरको वचनको एउटा खण्ड स्मरण गरेँ: “सायद, तिमीहरू सबैलाई यी वचनहरू थाहा छ होला: ‘किनभने हाम्रो हल्का र क्षणिक कष्टले हाम्रो निम्ति अझै अत्याधिक र अनन्त महिमाको काम गर्छ।’ तिमीहरू सबैले यी वचनहरू पहिल्यै सुनिसकेका छौ, तापनि तिमीहरूमध्ये कसैले पनि त्यसको सही अर्थ बुझेनौ। आज, तिमीहरू त्यसको साँचो महत्त्वको बारेमा पूरै सचेत छौ। यी वचनहरूलाई परमेश्‍वरले आखिरी दिनहरूमा पूरा गर्नुहुनेछ, अनि ती वचनहरू त्यो देशमा फन्को मारेर बस्ने ठूलो रातो अजिङ्गरद्वारा क्रूरतासाथ सताइएकाहरूमा पूरा हुनेछन्। त्यस ठूलो रातो अजिङ्गरले परमेश्‍वरलाई सताउँछ अनि त्यो परमेश्‍वरको शत्रु हो, यसैले, यही देशमा, परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्नेहरू उपहास र उत्पीडनको सिकार बन्छन्, अनि परिणामस्वरूप, यी वचनहरू मानिसहरूको यही समूह, अर्थात् तिमीहरूमा पूरा हुन्छन्। परमेश्‍वरलाई विरोध गर्ने यही देशमा यो सुरु भएको कारण, परमेश्‍वरका सबै कामले प्रचण्ड बाधाहरूको सामना गर्छ, अनि उहाँका धेरैजसो वचनहरू पूरा हुन समय लाग्छ; यसर्थ, मानिसहरू परमेश्‍वरको वचनको कारण विशुद्ध गरिन्छन्, जो कष्टकै भाग हो। त्यो ठूलो रातो अजिङ्गरको देशमा आफ्नो काम पूरा गर्नु परमेश्‍वरको निम्ति अत्यन्तै गाह्रो हुन्छ—तथापि यही कठिनाइद्वारा नै परमेश्‍वरले उहाँको बुद्धि र उहाँका अचम्‍मका कामहरू प्रकट गर्दै, अनि यसलाई मानिसहरूको यो समूहलाई पूर्ण बनाउने मौकाको रूपमा प्रयोग गर्दै, उहाँको कार्यको एउटा चरण पूरा गर्नुहुन्छ” (वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छको “के परमेश्‍वरको कार्य मानिसले सोचे झैँ सरल छ र?”)। हो, परमेश्‍वरको वचनबाट, मैले बुझेँ कि ठूलो रातो अजिङ्गरले परमेश्‍वरलाई घृणा गर्छ र उन्मत्त रूपमा उहाँको विरोध गर्छ, चीनमा परमेश्‍वरका विश्‍वासीहरूको हैसियतमा हामीले धेरै कष्ट भोग्‍न विवश छौँ, तर यो कष्ट धेरै अर्थपूर्ण छ। परमेश्‍वरले हाम्रो विश्‍वासलाई सिद्ध गर्न र हामीलाई अन्तर्ज्ञान दिनलाई त्यस प्रकारको कष्ट र संकष्टको प्रयोग गर्नुहुन्छ। मैले सोचेँ, मैले परमेश्‍वरमा विश्‍वास गरेको कारणले मात्रै, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले मलाई हिरासतमा राख्यो, स्कुललाई मलाई निष्कासन गर्न लगायो, र मलाई धम्क्याउन र मलाई साँचो बाटो त्याग्‍न दवाब दिन मेरो परिवारको काम र भविष्यलाई प्रयोग गर्‍यो। चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी साँच्‍चै नै दुष्ट छ! मेरो श्रीमानले मलाई परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्नदेखि रोक्‍ने कोसिस गर्नुभयो। किनकि उहाँले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका अफवाह र झुटहरूलाई विश्‍वास गर्नुभयो र तिनीहरूको हिंस्रक सुधारात्मक कार्बाहीहरूदेखि डराउनुभयो। चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको सतावटलाई व्यक्तिगत रूपले अनुभव गर्दा यसले मलाई चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको डरलाग्दो दुष्टता र सत्यलाई घृणा गर्ने शैतानी सार देखायो। मैले सोचेँ, जति बढी चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले मलाई सताउँछ, त्यति नै बढी म त्यसलाई इन्कार र परित्याग गर्नेछु र अन्त्यसम्मै परमेश्‍वरलाई पछ्याउनेछु। मैले परमेश्‍वरको वचनलाई पढ्न नसके तापनि वा मेरा दाजुभाइ-दिदीबहिनीहरूलाई सम्पर्क गर्न नसके तापनि, परमेश्‍वर विश्‍वासयोग्य हुनुहुन्छ र उहाँले मेरो निम्ति बाटो खोलिदिनुहुनेछ भनी विश्‍वास गरेँ।
दश महिनापछि, बल्ल मैले मण्डलीलाई सम्पर्क गर्ने मौका पाएँ। अन्त्यमा जब मैले परमेश्‍वरको वचन पढ्न सकेँ, तब म अत्यन्तै उत्साहित भएँ, अनि झन् बढी परमेश्‍वरको वचनको अनमोलता महसुस गरेँ। जति बढी मैले पढेँ, त्यति नै बढी मैले बलियो भएको महसुस गरेँ। थुप्रै महिनाहरूपछि एकदिन, मेरो श्रीमानले मेरो कोठामा मेरो उपासनाको नोटबुक भेट्टाउनुभयो। जब परमेश्‍वरमा मैले अझै विश्‍वास गरिरहेको उहाँले थाहा पाउनुभयो, उहाँ रिसले चूर हुनुभयो र एक मुक्‍का हालेर मलाई भुईंमा ढाल्नुभयो, त्यसपछि कम्तीमा २० चोटि मेरो टाउकोमा मुक्‍का बर्साउनुभयो। म अर्धचेत भएँ र रन्थनिएर लडेँ मेरो टाउकोमा ठूल्ठूला टुटुल्काहरू उठे। मेरो श्रीमानको अनुहार रिसले बलेको र मेरो छ वर्षीया छोरी भयभीत भएर बिलौना गर्न थालेको मलाई सम्झना छ। “मम्मीलाई नहिर्काउनुहोस्! मम्मीलाई नहिर्काउनुहोस्! …” मेरो श्रीमानले मेरो कठालो समातेर मलाई ढोकाबाहिर फ्याँक्‍नुभयो र रिसले चूर हुँदै भन्‍नुभयो, “यदि तँ अझै परमेश्‍वरमा विश्‍वास गरिरहन्छस् भने मेरो घरबाट बाहिर निस्किहाल्!” जब मैले मेरो श्रीमान्‌लाई बदलिएको, क्रुर र निर्दयी भएको र हामी वर्षौंसम्म सँगै बस्दा पनि पटक्‍कै वास्ता नगरेको देखेँ, मेरो हृदय टुट्यो। तर त्योभन्दा पनि, मेरी छोरी उहाँको प्रचण्ड रिसदेखि भयभीत भएको देख्‍नु सबैभन्दा असहनीय कुरा थियो। उहाँ मेरो नजिकै आउँदा, उनी सोच्थिन् कि उहाँले मलाई पिट्न लागिरहनुभएको छ, त्यसैले, उनी मेरो सामुन्‍ने दगुर्थिन् र मलाई बचाउन आफ्ना साना पाखुराहरू उठाउँथिन् अनि भन्थिन्, “तपाईं मम्मीदेखि टाढा बस्‍नुहोस्!” कहिलेकाहीँ, म माथि भर्‍याङमा हुँदा, मेरो श्रीमान् भर्‍याङको नजिक आउनुभयो भने मेरी छोरीले उहाँलाई चिच्याएर माथि नजानू भन्थिन्। हरेकपल्ट म मेरी छोरीको अनुहार डर र चिन्ताले भरिएको देख्थेँ, त्यो त्यस्तो कलिलो उमेरमा घरेलु हिंसाको सामना गर्नुपर्दाको मनोवैज्ञानिक क्षति थियो, यो मेरो हृदयलाई चक्कुले धसेजस्तै थियो अनि मैले ठूलो रातो अजिङ्गरलाई झन् बढी घृणा गरेँ। यी सबै विध्वंशहरू कम्युनिष्ट पार्टीको सतावटद्वारा भएको थियो।
एक दिन, मेरो श्रीमान् काम सिध्याएर फर्किनुभयो र मोबाइल झिकेर रिसाउँदै भन्‍नुभयो, “हेर, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले फेरि कति धेरै मानिसहरूलाई पक्राउ गर्‍यो। के तिमी अझै विश्‍वास गर्न चाहन्छौ? के तिमी मर्न चाहन्छौ? तिमी परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्न सक्छौ तर मलाई र मेरी छोरीलाई तिमीसँगै नघिस्याऊ। यदि तिमी फेरि पक्राउ पर्‍यौ भने हाम्रो जीवन असम्भव हुनेछ। यदि तिमीले परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्ने बाटो लिन्छौ भनी मलाई थाहा भएको भए, म तिमीसित कहिल्यै बिहे गर्ने थिइनँ।” मेरो श्रीमानले भन्‍नुभएको कुराले मलाई गहिरो चोट पुर्‍यायो। मैले पहिलेको समयलाई याद गरेँ मैले परमेश्‍वरमा विश्‍वास गरेकोले उहाँले मलाई अपराधीलाई भन्दा पनि कम स्वतन्त्रता दिनुभएको थियो, मलाई बारम्बार पिट्नुभएको थियो र यसले मेरो छोरीलाई मानसिक चोट पुर्‍याएको थियो, र मैले अब ज्यादा सम्झौता गर्न सक्दिनँ भन्‍ने महसुस गरेँ, त्यसैले, सम्बन्धविच्छेद गर्ने मेरो श्रीमानको अनुरोधमा म सहमत भएँ। मैले दृढ भई परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्न जारी राखेको देख्‍नुभएपछि, उहाँले मेरो भाइलाई बोलाउनुभयो र मलाई मनाउन आग्रह गर्नुभयो। मेरो भाइले सधैँ मलाई प्रेम गर्थ्यो र ऊ मेरो बारेमा सधैँ गर्व गर्थ्यो, तर मलाई चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले पक्राउ गरेको कारणले, मलाई स्कुलबाट निकालिएको र स्‍नातक तहको अध्ययन जारी राख्‍न निषेधित गरिएको थियो। त्यसपछि पनि मैले सम्बन्धविच्छेद गरेमा म पूर्ण रूपमा गाउँलेहरूको हाँसोको पात्र हुनेथिएँ। भाइ अति निरुत्साहित हुनेथियो! भाइको कसरी सामना गने हो, मलाई थाहा थिएन, मैले आफ्नो हृदयमा परमेश्‍वरलाई पुकारेँ र मलाई सुरक्षा दिन उहाँसित बिन्ती गरेँ ताकि म परमेश्‍वरको निम्ति गवाही भई खडा हुन सकूँ, ताकि वातावरण जस्तै भए पनि, मैले कहिल्यै परमेश्‍वरमाथिको आफ्नो विश्‍वास नत्यागूँ। त्यसपछि, मैले परमेश्‍वरको वचनको एउटा खण्ड स्मरण गरेँ। “तँभित्र मेरो साहस हुनुपर्छ, र विश्‍वास नगर्ने आफन्तहरूको सामना गर्नका लागि तँसँग सिद्धान्तहरू हुनुपर्छ। तैपनि, तँ मेरो लागि कुनै पनि अन्धकारको शक्तिप्रति समर्पित हुनु हुँदैन। सिद्ध मार्गमा हिँड्नका लागि मेरो बुद्धिमा भर पर्; शैतानका कुनै पनि षड्यन्त्रलाई प्रभाव पार्न नदे” (वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छको, प्रारम्‍भमा ख्रीष्‍टका वाणीहरूको “अध्याय १०”)। ठीक हो। परमेश्‍वरले मानवजातिको सृष्टि गर्नुभयो, र परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्नु र परमेश्‍वरलाई पछ्याउनु स्वाभाविक र सही कुरा हुन्। हामी आफ्नो बाटोको छनौटमा दृढ भई खडा हुनुपर्छ र हामी शैतानद्वारा मूर्ख बनिनुहुन्‍न। हामीले सबैभन्दा घनिष्ठ मानिसहरूलाई पनि हस्तक्षेप गर्न दिन सक्दैनौँ। त्यसपछि, परमेश्‍वरमाथिको मेरो विश्‍वासको कारण भएका सबै कुराको निम्ति मेरो भाइको सामु मेरो श्रीमानले मलाई दोष्याउनुभयो। जब मेरो श्रीमानले म शान्त भएको देख्‍नुभयो, तब उहाँले मलाई हिर्काउन आफ्नो हात उठाउनुभयो तर मेरो भाइले उहाँलाई रोक्यो। मेरो भाइले शान्तपूर्वक मलाई भन्यो, “तपाईं वयस्क हुनुहुन्छ र आफ्नो जीवनको बारेमा तपाईंले आफ्नै निर्णयहरू लिन सक्‍नुहुन्छ। तर, यदि तपाईंले सम्बन्धविच्छेद गर्नुभयो भने तपाईंको छोरीलाई के हुनेछ, त्यसबारेमा तपाईंले सोच्न आवश्यक छ। यदि मेरो छोरीलाई के भयो भनी तपाईंले हेर्नुभयो भने, तपाईंको छोरीलाई के हुनेछ भनी तपाईंले थाहा पाउनुहुनेछ। …” मेरा भाइका शब्दहरूले मलाई एकछिन दुःखी बनायो, मैले उसको सम्बन्धविच्छेदको बारेमा सोचेँ, कसरी उसकी छोरीलाई गिल्ला गरिन्थ्यो र उसलाई वरपरका मानिसहरूद्वारा तुच्छ नजरले हेरिन्थ्यो भनी सोचेँ। आमाविना बच्‍चा कति दयनीय हुन्छ। मैले सोचेँ, यदि मैले सम्बन्धविच्छेद गरेँ भने के मेरी छोरी पनि आमाविहीन बच्‍चा हुनेछैन र? के उनले शिक्षक र सहपाठीहरूबाट भेदभाव र गिल्ला सहनेछैनन् र? म उनको छेउमा नहुँदा यदि उनी अविश्‍वासी पिता र बाजेबज्यूसित बसिन् भने, के उनी परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्ने बाटोमा हिँड्न सक्‍नेछिन् र? उनी कति सानै छिन् भनी सोच्दा, उनीसित अलग्गिने कुरा मैले सहन नसकेको अनुभूति गरेँ।
म त्यस समयमा साँच्‍चै नै दयनीय थिएँ, त्यसैले मैले परमेश्‍वरसित प्रार्थना गरेँ, “परमेश्‍वर, म मेरी छोरीलाई जान दिन सक्दिनँ। मलाई सधैँ उनको भविष्यको लागि पीडा महसुस हुन्छ। मलाई अन्तर्दृष्टि दिन, मार्गदर्शन गर्न र मेरो हृदयलाई सुरक्षा दिन म तपाईंलाई बिन्ती गर्छु।” त्यसपछि, मैले परमेश्‍वरको वचनबाट दुईवटा खण्डहरू पढेँ अनि त्यहाँ मैले अभ्यासको बाटो भेट्टाएँ। “जन्‍म दिने र हुर्काउने बाहेक, अभिभावकको रूपमा रहेको आमाबाबुको जिम्‍मेवारी भनेको तिनीहरूलाई हुर्कनको निम्ति औपचारिक वातावरण दिनु मात्रै हो, किनभने सृष्टिकर्ताको पूर्वनिर्धारित योजनाले बाहेक व्यक्तिको नियतिमा अरू केहीले पनि प्रभाव पार्दैन। आफ्‍नो भविष्य कस्तो हुनेछ भनेर कसैले पनि नियन्त्रण गर्न सक्दैन; धेरै पहिले अग्रिम रूपमा नै यसको पूर्वनिर्धारण गरिएको हुन्छ, र व्यक्तिको बाबुआमाले समेत उसको नियति परिवर्तन गर्न सक्दैन। नियतिको बारेमा भन्दा, हरेक व्यक्ति स्वतन्त्र हुन्छ, र हरेकको आ-आफ्‍नै नियति हुन्छ। त्यसैले, कसैको बाबुआमाले उसको जीवनको नियतिलाई रोक्‍न वा उसले जीवनमा खेल्‍ने भूमिकामा अलिकति पनि प्रभाव पार्न सक्दैन। … जीवनमा व्यक्तिको मिसनलाई हासिल गर्नमा उसलाई उसका बाबुआमाले सहयोग गर्न सक्दैनन्, त्यसै गरी, कसैका आफन्तले व्यक्तिलाई उसको जीवनको भूमिका निर्वाह गर्न सहयोग गर्न सक्दैनन्। व्यक्तिले आफ्‍नो मिसन कसरी पूरा गर्छ र उसले कस्तो प्रकारको जिउने वातावरणमा आफ्‍नो भूमिका निर्वाह गर्छ त्यसलाई पूर्ण रूपमा व्यक्तिको जीवनको नियतिले नै निर्धारित गर्छ। अर्को शब्‍दमा भन्दा, अरू कुनै पनि वस्तुगत अवस्थाहरूले व्यक्तिको मिसनलाई प्रभाव पार्न सक्दैन, जसलाई सृष्टिकर्ताले नै पूर्वनिर्धारित गर्नुभएको हुन्छ। सबै मानिसहरू तिनीहरू हुर्केको वातावरणमा नै परिपक्‍व हुन्छन्; त्यसपछि, क्रमिक रूपमा, तिनीहरू जीवनको आफ्‍नै मार्गमा हिँड्न सुरु गर्छन् अनि सृष्टिकर्ताले तिनीहरूका लागि योजना गरिदिनुभएका नियतिहरूलाई पूरा गर्छन्। स्वाभाविक रूपमा, अनायासै, तिनीहरू मानवजातिको विशाल समुद्रमा मिसिन्छन् अनि तिनीहरूको आफ्‍नै जीवनका पदहरू धारण गर्छन्, जहाँ सृष्टिकर्ताको पूर्वनिर्धारित नियतिको खातिर, उहाँको सार्वभौमिकताको खातिर, तिनीहरूले सृष्टि गरिएका प्राणीहरूका रूपमा आफ्ना जिम्‍मेवारीहरूलाई पूरा गर्न थाल्छन्” (वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छको “परमेश्‍वर स्वयम् अद्वितीय ३”)। अझै एउटा खण्ड छ। “मानिसहरूका योजना र कल्‍पनाहरू त पूर्ण छन्; तर के तिनीहरूले जन्माउने सन्तानहरूको संख्या, तिनीहरूका छोराछोरीको रूप, क्षमता आदि इत्यादि तिनीहरूले निर्णय गर्ने कुरा होइन, तिनीहरूको हातमा त आफ्ना सन्तानको नियति समेत छैन भन्‍ने तिनीहरूलाई थाहा छैन र? मानिसहरू आफ्‍नो नियतिका मालिक होइनन्, तैपनि तिनीहरूले नयाँ पुस्ताको नियति परिवर्तन गर्ने आशा गर्छन्; तिनीहरू आफ्‍नै नियतिबाट उम्कन असमर्थ छन्, तैपनि तिनीहरूले आफ्‍ना छोराछोरीहरूको नियति नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्छन्। के तिनीहरू आफैले आफ्नो अधिक-मूल्याङ्कन गरिरहेका छैनन् र? के यो मानवीय मूर्खता र अज्ञानता होइन र?” (वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छको “परमेश्‍वर स्वयम् अद्वितीय ३”)। हो, परमेश्‍वरले सबै कुरा सृष्टि गर्नुभयो र उहाँको सबै कुरामा सार्वभौमिकता छ मानिसहरूको नियति परमेश्‍वरको हातमा छ। अभिभावकहरूले केवल बच्‍चाहरूलाई हुर्काउँछन्, तिनीहरूले बच्‍चाको भाग्यलाई परिवर्तन गर्न सक्दैनन। म सधैँ सोच्थेँ, म मेरो छोरीको भाग्यलाई प्रभाव पार्न र नियन्त्रण गर्न सक्छु, र म उनको छेउमा भएसम्म उनले खुशी भेट्टाउन सक्छिन्, र म उनलाई परमेश्‍वरमाथिको विश्‍वासको बाटोमा डोर्‍याउन सक्छु। तर दोहोर्‍याएर सोच्दा त, मेरो आफ्नै भाग्यमाथि पनि नियन्त्रण थिएन, तब म कसरी आफ्नी छोरीको नियति नियन्त्रण गर्न सकूँला? केही दिनअघि मेरी छोरी बिरामी भएको र बेहोस भएको बारेमा मैले सोचेँ, तर उनको पीडालाई कम गराउन मैले केही गर्न सकिनँ, मैले केवल उभिएर हेर्न मात्र सकेँ। मैले मेरी छोरीलाई सुरक्षा गर्न परमेश्‍वरसित याचना मात्र गर्न सकेँ। भीर चढ्दा ठेस खाएर मेरी छोरी झण्डैले खसिन्। मैले केही गर्न सकिनँ। उनी भीरको किनारातिर रहेको सुकेको रूखद्वारा अद्भूत तरिकाले बचिन्। यी तथ्यहरूबाट मैले बुझेँ कि मैले मेरी छोरीलाई हरसम्भव प्रकारले हेरविचार गरे पनि उनी बिरामी पर्नेछैनन् वा उनले कुनै विपद् भोग्‍नुपर्नेछैन भन्‍ने कुराको कुनै निश्‍चयता थिएन। यी कुराहरू बुझेपछि, मैले छुटकारा पाएको महसुस गरेँ। मैले मेरो बच्‍चाको जीवन परमेश्‍वरको हातमा राखिदिनुपर्छ र परमेश्‍वरको सार्वभौमिकता र बन्दोबस्तहरूलाई शिरोपर गर्नुपर्छ भन्‍ने महसुस गरेँ। सृष्टि प्राणीको हैसियतले मैले गर्नुपर्ने त्यही थियो।
पछि, जब मैले दृढ भएर परमेश्‍वरमा विश्‍वास गरेको देख्‍नुभयो, तब उहाँले मसित सम्बन्धविच्छेद गर्ने निर्णय गर्नुभयो। उहाँले मलाई केही नलिई घरबाट निस्कन लगाउनुभयो र छोरीको पालनपोषण गर्ने अधिकार मलाई दिन पनि इन्कार गर्नुभयो। उहाँले मेरो भेटघाटको अधिकार पनि खोस्‍न चाहनुहुन्थ्यो। जब मैले उहाँसित सम्पत्तिको बाँडफाँडको बारेमा सोधेँ, उहाँले मलाई स्टीलको कपले मेरो टाउकोमा हिर्काउने प्रयास पनि गर्नुभयो। मैले यसरी आफैलाई बचाउन आफ्नो हातलाई प्रयोग गरेँ तर मेरा नाडीहरूमा चोट लाग्यो, जसले गर्दा मैले दुई महिनासम्म गह्रौँ सामानहरू उठाउन सकिनँ। उहाँले मलाई थुप्रैचोटि पिठ्यूँमा हिर्काउनुभयो, जसले गर्दा म एक महिनाभन्दा बढी समयसम्म नराम्रोसित खोकेँ। ती सबैपछि पनि, मैले कामबाट बचाएको हजारौँ पैसा उहाँले खोस्‍नुभयो। उहाँले भन्‍नुभयो, “तिमी परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्छौ, होइन र? त्यसो भए, तिम्रो परमेश्‍वरकहाँ जाऊ, तिमीलाई खुवाउन र पहिराउन उहाँसित नै माग।” जब मेरो श्रीमान् यसरी अविवेकी भएको मैले देखेँ, तब मैले परमेश्‍वरका वचनहरू स्मरण गरेँ, “यदि परमेश्‍वरलाई उल्‍लेख गर्दा मानिस क्रोधित हुन्छ अनि रिसले चूर हुन्छ भने, के उसले परमेश्‍वरलाई देखेको हुन्छ? के परमेश्‍वर को हुनुहुन्छ भन्‍ने उसलाई थाहा हुन्छ? परमेश्‍वर को हुनुहुन्छ भन्‍ने उसलाई थाहा हुँदैन, उहाँमा विश्‍वास गर्दैन, अनि परमेश्‍वर ऊसँग बोल्‍नुभएको हुँदैन। परमेश्‍वरले उसलाई कहिल्यै कष्ट दिनुभएको छैन भने, किन ऊ रिसाउँछ? के हामी यो व्यक्ति दुष्ट छ भनेर भन्‍न सक्छौं? सांसारिक चलनचल्ती, खुवाइ पियाइ, अनि सुख-चैनको खोजी, अनि सेलिब्रेटीहरूको पछि दगुर्ने—यीमध्ये कुनै पनि कुराले त्यस्तो मानिसलाई झिज्याउँदैन। तैपनि, ‘परमेश्‍वर’ भन्‍ने शब्‍द, वा परमेश्‍वरको वचनको सत्यतालाई उल्‍लेख गर्ने बित्तिकै, ऊ रिसले चूर भइहाल्छ। के यसले दुष्ट प्रकृति हुनुलाई जनाउँदैन र? यो मानिसको दुष्ट प्रकृति हो भनेर प्रमाणित गर्न यो नै पर्याप्त छ” (वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छको “परमेश्‍वर स्वयम् अद्वितीय ५”)। परमेश्‍वरका वचनहरूले जे प्रकट गर्‍यो, त्यसले मलाई परमेश्‍वरलाई विरोध गर्ने मेरो श्रीमानको दुष्ट प्रकृति स्पष्टसित देखायो। मैले पहिलको कुरा सम्झेँः सुरुमा, जब मेरो श्रीमानले मैले सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्छु भन्‍ने कुरा जान्‍नुभयो, तब उहाँ विशेष रूपले आक्रामक हुनुभयो उहाँले परमेश्‍वरको वचनका मेरा पुस्तकहरू पनि च्यातिदिनुभयो। पछि, उहाँले मलाई परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्नदेखि रोक्‍ने कोसिस गर्नुभयो र सम्बन्धविच्छेद गर्ने कुरा गर्नुभयो। म पक्राउ परेर मुक्त भइसकेपछि, उहाँले मलाई कैदीसरह व्यवहार गर्नुभयो, मलाई कुनै स्वतन्त्रता दिनुभएन र मलाई सधैँ क्रुरतापूर्वक पिट्नुभयो। कहिलेकाहीँ उहाँले मलाई मार्न चाहनुभएको जस्तो देखिन्थ्यो। जब हामीले सम्बन्धविच्छेद गर्‍यौँ, तब मलाई निराशमा धकेल्न र मेरो जीवन असम्भव तुल्याउन उहाँले मेरा सबै सम्पत्तिहरू खोस्‍नुभयो। मलाई परमेश्‍वरलाई विश्‍वासघात गर्ने तुल्याउनु नै उहाँको लक्ष्य थियो। तब मैले मेरो श्रीमानको प्रकृति र सारलाई स्पष्टसितखेँ। उहाँ परमेश्‍वरलाई घृणा गर्ने र विरोध गर्ने दियाबलस नै हुनुहुन्थ्यो। त्यस प्रकारको व्यक्तिसित बस्दा हामीसित कुनै कुरा साझा हुँदैनथ्यो र मसित कुनै स्वतन्त्रता हुँदैनथ्यो, अनि मैले पिटाइ खान्थेँ र म बन्देजमा जिउनुपर्थ्यो। मैले सोचेँ, यो कसरी घर हुन सक्छ? ती अरु केही नभई, साङलाहरू थिए। त्यो नरक थियो।
सम्बन्धविच्छेद पछि, मेरो श्रीमानले मलाई फेरि कहिल्यै बाधा र नियन्त्रण गरेनन्। म भेलाहरूमा जान सकेँ र सामान्य रीतिले परमेश्‍वरका वचनहरू पढ्न सकेँ र मैले चाँडै मण्डलीका जिम्मेवारीहरू सम्हाल्न सकेँ। मैले ठूलो राहत र छुटकारा महसुस गरेँ अनि मलाई बचाउनुभएकोमा मैले परमेश्‍वरलाई धन्यवाद दिएँ।
अघिल्लो: मैले यो मार्गमा दृढ छु
अर्को: कठिनाइले मलाई मेरो कर्तव्यबाट टाढा राख्‍न सक्दैन